Ogow Itoobiyaan ma Tihid! – Rasaasa News
Ogow Itoobiyaan ma Tihid!
August 5, 2018 – Gabalka Soomaalidu waxaa uu ka mid ahaa meelaha ugu nabdoon ismaamulada Itoobiya, nolosha dadka Soomaaliyeedna dib ayey u soo noqonaysay.
Gabalku wuxuu leeyahay ciidamo dagaan oo xoog leh, kuwaas oo sugay nabadgalayda xuduuda iyo gudagahaba. Ciidamadan waxaa aas aaskooda iyo maamulkoodaba lahaa madaxwaynaha dagaanka Soomaalida Itoobiya.
Shalay, waxaa ka dhacday magaalada Jijiga arin lamo filaan oo lid ku ah dastuurka federlaka Itoobiya, ka dib markii ay ciidamada milatariga Itoobiya ay damceen in ay xoog kula wareegaan maamulka dagaanka Soomaalida.
Waxaa yaab noqotay in hal mar shacabka dagaanka Sommalida tuulo kasta oo ku taal ay kaga jawaabtay arintaas banaanbax ay ku difaacayaan dawlada dagaanka iyo madaxdoodaba.
Dawlada fadaraalka Ethiopia waxay arintaas kaga jawaabtay in ay jarto dhamaan adeegyadii shacabka sida; biyaha, korontada, telefoonada iyo khadkii internetka.
Daawlada Ethiopia iyada ayaa weerar ku qaaday dagaanka Soomaalida, iyada yaa jartay adeegyada shacabka, waa arin cadowtinimo ah oo ay kula dhaqmayso shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in dagaamada kale ee Ethiopia ayna dawlada fadaralku sidan ula dhaqmin, waayo waa dad Itoobiyan ah.
Dawlada fedaraalku waxay ku andacoonaysaa in ay jiraan dad ka soohorjeeda maamulka. Dadka ay sheegayo waa dad qurbaha ka tagay, oo uu soo abaabulay Abiye Ahmed si uu ugu badalo maamulka sharciga ah mid sharci daro ah oo uu isagu wato.
“Nin dagan guri muraayado ah, dhagax ma tuur tuuro.”
Marka laga tago magaalada Jijga dagaanka Soomaalida waxaa istaagay dhamaan adeegii shacabka.
Milatariga ayaa gacanta ku haya magaalooyinka iyo dagmooyinka iyaga oo leh waxaanu sugaynaa amaanka.
Waxaa iyaduna mudan in dhamaan dadkii Itoobiyaanka ahaa ee ka shaqaysanayay magaalooyinka dagaanka Soomaalida in ay ku urureen xeryaha ciidamada Itoobiya, iyaga oo cabsi ka qaba in wax la yeelo.
Ciidamada Itoobiya waxay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee dagan magaalooyinka qori afkii, wax dhaqdhaqaa ahna looma ogola.
Hadaba, intee in la,eg ayey arintu sidan ku sii socon kartaa.
Waxaa haboon in dawlada federalku ay arinta dabciso kuna soo celiso sidii ay arintu kolkii hore ahayd, iyada oo ka qaadaysa ciidamada milatariga.